Maamulka Jubbaland oo Maanta qabanayaa doorashada lix Kursi | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maamulka Jubbaland oo Maanta qabanayaa doorashada lix Kursi
Maanta oo Axad ah ayaa waxaa lagu wadaa in Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose lagu qabto doorashada lix kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo Guddiga doorashooyinka Jubbaland ay horay u shaaciyeen.
Kuraasta doorashadooda Maanta lagu qabanayo Kismaayo ayaa waxaa ku tartami doono 12 musharrax oo dhawaan la siiyay Shahaadada musharraxnimo kadib markii ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa, waxaana ay kala yihiin kuraasta Maanta doorashadooda la qabanayo.
1: Hop107 oo ay ku fadhido Xaawo Maxamed Aadan, balse Maanta ay ku tartami doonaan Maxamed Sheekh Nuur Cismaan & Xasan Cismaan Aadan.
2: Hop114 oo uu ku fadhiyo Cabdulqaadir Maxamed Cismaan, waxaana ku tartami doona Cumar Ibraahim Xaashi & Cabdi Aadan Cabdullaahi, iyada oo meesha laga saaray Xildhibaankii horay ugu fadhiyay.
3: Hop120 oo uu ku fadhiyo C/qaadir Sheekh Cali Ibraahim (Baqdaadi) oo mar soo noqday Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Soomaaliya, hayeeshee ay ku tartami doonaan Asad Cabdirisaaq Maxamed & Saciid Cabduqaadir Shukri, iyada oo meesha laga saaray Xildhibaankii horay ugu fadhiyay ee C/qaadir Sheekh Cali Ibraahim (Baqdaadi) .
4: Hop111 oo uu hadda ku fadhiyo Maxamed Nuur Iftin Shambara, waxaana ku tartami doona Cabaas Cali Ibraahim iyo Aadan Mursal Cadoow.
5:Hop028 oo uu ku fadhiyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir, balse waxaa Maanta ku tartami doona Cabdinuur Cali Aadan iyo Axmed Cabdi Maxamed.
6: Hop093 oo uu ku fadhiyo Wasiirkii hore ee Diinta & Awqaafta Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo meesha laga saaray, waxaana ku tartami doona Saciid Maxamed Cali iyo Mahad Nuur Xaaji Cismaan.
Maamulka Jubbaland ayaa noqday Maamulka labaad ee dardar gelinaya doorashada Golaha Shacabka, waxaana Maalmaha soo socda degaannada kale ee dowlad Goboleedyada lagu qabanayaa doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Maamulka Jubbaland oo Maanta qabanayaa doorashada lix Kursi was last modified: January 23rd, 2022 by warsan radio
DHAGEYSO. MUSHARAX IBRAAHIM ISAAQ YAROW OO BEESHIISA KA SOO HORJEESATEY U TARTAMIDA KURSIGA GUDOOMIYAHA BAARLAMANKA
Dhageyso:-Barnaamij ku saabsan Cadaaladda, Haweenka iyo Amniga .